ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Riikka Laatu ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Election News 2017 Election ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Riikka Laatu ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: ဇနျနဝါရီ 05, 2018 In: 2017 Election, Election NewsNo Comments
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Riikka Laatu ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌရုံး၊ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်၊ ဦးမြင့်နိုင်၊ ဦးသန်းဌေးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် နောင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲများ အတွက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ကြိုတင်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် CSO အဖွဲ့များ၏ အကူအညီ ရယူဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အခြေအနေများ၊ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းပြုစုခြင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်များ အသိပညာပေးခြင်း၊ ကြိုတင် ဆန္ဒမဲပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ Demo Finland, Netherlands Institute for Multiparty Democracy(NIMD)၏ Myanmar School of Politics (MySoP)မှ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် ပို့ချနေမှုအား ဆက်လက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည့် အခြေအနေများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ် များတွင် ဖင်လန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ပူးပေါင်းကူညီ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးလှသိနျးသညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဖငျလနျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Ms. Riikka Laatu ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့
ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးလှသိနျးသညျ မွနျမာ နိုငျငံ ဆိုငျရာ ဖငျလနျ နိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Ms. Riikka Laatu ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့အားယနေ့ နံနကျ ၁၁:၃၀ နာရီတှငျ နပွေညျတျောရှိ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ ဥက်ကဋ်ဌရုံး၊ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံ တှဆေုံ့ရာ ကျောမရှငျ အဖှဲ့ဝငျမြား ဖွဈကွသော ဦးအောငျမွငျ့၊ ဦးစိုးရယျ၊ ဦးထှနျးခငျ၊ ဦးလှတငျ့၊ ဦးမွငျ့နိုငျ၊ ဦးသနျးဌေးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျခဲ့ကွသညျ။
ထိုသို့ တှဆေုံ့စဉျ နောငျကငျြးပ ပွုလုပျမညျ့ ရှေးကောကျပှဲမြား အတှကျ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျမှ ကွိုတငျပွငျဆငျ ဆောငျရှကျ လကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ရှေးကောကျပှဲ လုပျငနျးစဉျမြားတှငျ နိုငျငံရေး ပါတီမြားနှငျ့ CSO အဖှဲ့မြား၏ အကူအညီ ရယူ ဆောငျရှကျခဲ့မှု အခွအေနမြေား၊ မဲဆန်ဒရှငျ စာရငျးပွုစုခွငျး၊ မဲဆန်ဒရှငျမြားအသိပညာပေးခွငျး၊ ကွိုတငျ ဆန်ဒမဲပေးခွငျး လုပျငနျးစဉျမြား၊ Demo Finland, Netherlands Institute for Multiparty Democracy(NIMD)၏ Myanmar School of Politics (MySoP)မှ သငျတနျးမြား ဖှငျ့လှဈ ပို့ခနြမှေုအား ဆကျလကျ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျသှားမညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ ရှေးကောကျပှဲ လုပျငနျးစဉျ မြားတှငျ ဖငျလနျ နိုငျငံအနဖွေငျ့ ပူးပေါငျး ကူညီ ဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေားကို ရငျးနှီး ပှငျ့လငျးစှာ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Riikka Laatu ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ